Iberibe Higher, Ever Higher
Ọnụ na anyị na iwu aha drones anyị nwere ike ime ka ịrịba echiche nke gị oru ngo, omume ma ọ bụ echichi. N'agbanyeghị na ọ gị agbamakwụkwọ, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụlọ, ọbụna efe n'elu Okirikiri.
Anyị foto ka photos na ọ dịkarịa ala 4K mkpebi na na zuru immersive 360. Ha niile na-mmeri maka ọrụ ha mba na mba filmmakers na foto n'asọmpi. anyị 360 Foto na-Google tụkwasịrị obi na nwere ihe pụrụ iche na ikike na ohere zoro ebe nke ha họọrọ home obodo. N'okpuru nkịtị ọnọdụ foto na uploads iri mbụ ọnọdụ ke Google. Onye ọ bụla echebe nwere ihe karịrị otu nde echiche. Gị azụmahịa nwere ike na-akpa ebe na Google Maps ogo na anyị pụtara ụzọ na imagery.
Legal Flight Rights & ede n'akwụkwọ
na ọchịchị na ndị isi obodo nwere ike ime ihe niile dị gị mmepụta atụmatụ. Special ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere flights na efe n'elu photos. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. Anyị obodo dabeere rụọ. Nke a akwụkwọ na-enye ohere a gbapụ ka a ụgbọelu na a ọdịda dị ka a ụgbọelu. Onye ọ bụla gbapụ na-ukara aha na nwetara ikike. Nke a akwụkwọ na-adịghị ekwe ka na-eme ka film ma ọ bụ foto. N'ihi na nke a adị iche iche iwu na ọchịchị ngalaba.
ka na-abụghị kwekọrọ. Ahụhụ a nwere ike na-eri gị 20000 Euro ruo n'ụlọ mkpọrọ. Anyị na-ahazi maka ị na Europe na flightrights na iwu akwụkwọ. Ọ bụ na-ekwe omume na-emekwa ka unu na gị ọrụ na anyị ndepụta, na i nwere ike ofufe anyị drone iwu. Nlereanya a na-eji maka TV nwetara na mkpa ikpe ma ọ bụ site na-eme njem nleta na-amasị na-emepụta nwere iwu foto. Jụọ anyị n'isi frontto atụle ihe nlereanya kasị mma ị.